Flashlight HD LED 2.01.10 (Google Play) Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.01.10 (Google Play) လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Flashlight HD LED
Flashlight HD LED ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ထိုအရပ်၌များစွာသောလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps များဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဒီတစ်ခုရရှိရန်?
- တဦးတည်း button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ချက်ချင်းအလင်းရ
- LED အဆိုပါပေါင်းစည်းလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုအသုံးပြုသည်
- အရောင်အလင်းဆီမီးခွက် (အားလုံးကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်) အဖြစ်ကိုလည်းသင်၏အပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြု
- အမြန် access များအတွက်ဝစ်ဂျက်ကို add
ဒီ app ကိုအခြား app တွေအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးသောသူတို့အားအပါအဝင်အများဆုံးဖုန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပမာအဘို့လည်းပါဝင်သည်: Sony Xperia, Samsung ရဲ့ Galaxy S8 မှာ, S7 Edge, S6, J7, Xiaomi က Redmi Note, Oppo, Huawei LG က, Lenovo က, Vivo HTC, Alcatel, ZTE Asus က Zenfone, Motorola က Moto G4, င2... နှင့်ပိုပြီးအများအပြား!
Flashlight HD LED အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Flashlight HD LED အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Flashlight HD LED အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Flashlight HD LED အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.71M 3494.2M
Flashlight HD LED ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Flashlight HD LED အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.01.10 (Google Play)
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.smallte.ch/privacy-policy-flashlight_en.html
App Name: Flashlight HD LED
ဗားရွင္း: 2.01.10 (Google Play)
လက်မှတ် SHA1: 51:F9:B8:06:2E:AB:20:C6:B2:A4:25:17:7C:D4:77:0B:BF:92:41:EB
အဖွဲ့အစည်း (O): smalltech Sàrl
နယ်မြေ (L): Lausanne
Flashlight HD LED APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ